ओलीको तिब्बत भ्रमण : प्रचण्ड भ्रमणकै दोस्रो भाग ? – SidhaRekha
ओलीको तिब्बत भ्रमण : प्रचण्ड भ्रमणकै दोस्रो भाग ?
२०७४ श्रावण ८, आईतवार १४:३७ July 23, 2017
सीधारेखा संवाददाता ||
काठमाडौं, ८ साउन । अहिले मुलुक नयाँ संविधान कार्यान्वयनको दिशामा रहेको छ । लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त उलब्धिको रक्षा गर्दै जारी भएको नयाँ संविधानपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवेश बदलिँदो छ । बदलिँदो परिवेशसँगै नेपालमा पछिल्लो समय निकटका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको चासो पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हुनत दुई छिमेकीको नेपाल-चासो कुनै नयाँ होइन । विशेषतः भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामै राख्ने चासो धेरै पुरानो हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालमा ठूल्ठूला उतारचढाव आए । सँगै चीनसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । चीनसँग पछिल्लोे समय महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन्, जसलाई भारतले नेपालमा बढ्दो प्रभावका रूपमा समेत हेरेको छ । यसरी दुई छिमेकीको चासोमा रहेको नेपालको राजनीतिमा फेरि नयाँ दृश्य सतहमा आउन थालेका छन् । हालसालैको विकसित नयाँ परिदृश्यको सेरोफेरोमा रही यहाँ केही विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले देउवालाई भारत भ्रमण गर्न निम्तो दिए । नेपालमा हरेक सरकारको पहिलो भ्रमण भारतबाटै हुने नीतिलाई प्रधानमन्त्री देउवाले पनि निरन्तरता दिने भएका छन् । उनको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र रूपले भइरहेको छ र केही दिनभित्रै उनी मोदीलाई भेट्न पुग्नेछन् । यसका लागि केही समयअघि मात्र परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले दिल्लीको भ्रमण गरिसकेका छन् । र, केही समयपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछिन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणको तयारी बढ्दै जाँदा उत्तरी छिमेकी चीनको चाल पनि बढी चलायमान हुन थालेको विश्लेषण नेपालमा भइरहेको छ । एक साताअघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्ष्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बैंकक भ्रमणमा गए । यसै साता मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्, जसलाई प्रचण्डको बैंकक भ्रमणको भाग दुईका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
शनिबार मानसरोवरको भ्रमणका रूपमा उत्तरतर्फ लागेको ओलीले त्यहाँ उच्च नेतृत्वलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोत बताउँछ । औपचारिक निम्ता दिएर संवाद गर्न नसक्ने प्रोटोकल भएका नेताहरूलाई या त तेस्रो भूमिमा बोलाएर भेट गरिन्छ, या त अन्य कुनै ब्यानरमा निम्ता गरेर । यो विश्वव्यापी चलन हो । प्रचण्ड र ओलीको हकमा पनि चिनियाँ पक्षबाट यही आइडिया प्रयोग गरी भेट्न खोजेको विश्लेषण भइरहेछ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भैसकेको, असोज २ को तेस्रो चरणको चुनावका लागि सरकारको तयारी तीव्र भइरहेका बेला दुई छिमेकीले नेपालको राजनीतिमा फेरि चासो बढाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
ओली सपरिवार तिब्बत प्रस्थान गर्नुको कारण हिन्दू तथा बौद्ध धर्मालम्बीको तीर्थस्थल मानसरोवरको भ्रमण रहेको एमाले पार्टी र ओलीको निजी सचिवालयले प्रचार गरेको थियो । यद्यपि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवं चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको निमन्त्रणामा ओली चीन उत्तरतिर गएका हुन् भन्ने मिडियामा आइसकेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग ओलीले दुई पक्षीय हितका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको गोप्य स्रोतबाट आएपछि मिडियाहरुले यसलाई बाहिर ल्याएका छन् ।
जसरी प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारका लागि बैंकक गएको भन्ने प्रचार माओवादी केन्द्रबाट भएको थियो र त्यहाँ प्रचण्डले चिनियाँ नेता र उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेका थिए भनिन्छ, ठीक त्यसैगरी ओलीको मानसरोवर तीर्थयात्राको हवाला दिएर चिनियाँ नेता तथा अधिकारीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बताइन्छ । ओली र प्रचण्डसँग चीनले जे अपेक्षा गरेको थियो, त्यसको कार्यन्वयनमा अहिले चिनियाँ चासो बढेको देखिन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो । २०७३ साल चैतमा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल र चीनबीचमा भएका दुई पक्षीय हितका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ, जसलाई चीनले चासोको साथ हेरेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका चिनियाँ पक्षसँगको सहमतिको कार्यान्वयनमा पनि चीनको उत्तिकै चासोको विषय हो ।
वर्तमान सरकारमा कांग्रेसको बहुमत छ । जसलाई भारतले या चीन दुवैले प्रभावमा पारिराख्न कोशिस गरिरहेका छन् । चीनसँग भएका सहमतिको कार्यन्वयन र वर्तमान कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारबाट चीनले अपेक्षा गरेका एजेण्डाबारे प्रचण्डसँग संवाद भएको बताइन्छ । ओलीको भ्रमणका बेला यिनै प्रसंगमा कुरा हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
उता भारतको थिंक ट्यांकले नै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै भारत सरकारलाई नेपालसँगको छिमेक नीतिमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ । भारतीय नेताहरू स्वयं पनि नेपालमा भारतले आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । यही बेला चीन र भारतबीच सीमा विवाद बढेर तनावकै रूप लिन थालेको छ । नेपाल दुवै देशको हितैषी मित्र हुँदाहुँदै पनि बेलाबेला यहाँ दुवै देशले आशंका पैदा गर्छन् र चासोहरु स्वाभिकैले बढाउने गरेका छन् ।
छिमेकीहरूको बढ्दो चासोको सीधा असर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा समेत पर्ने गरेको छ । अहिले पनि यसबारे विश्लेषण भइरहका छन् । एक स्रोतका अनुसार, प्रचण्ड वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यशैली र निर्णयक्षमतासँग सन्तुष्ट छैनन् । साथै उनका केही अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने संकेत समेत गर्दै आएका छन् । उता ओलीले पनि देउवाविरुद्ध जस्तोसुकै सहकार्य गर्न तयार रहेको बेलाबेला दर्शाउँदै आएका छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई पुनः बिउँताउने चलखेल पनि भइरहेको बताइन्छ, यसमा चीनको सूक्ष्म म्यानेजमेन्ट समेत रहनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
आगामी प्रदेशसभा र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी सरकारसँग छ, त्यसअघि नै संविधान संशोधन र प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन पनि गर्नु बाँकी छ । तर समय थोरै छ । यस्तो वर्तमान सरकारको कार्यशैली प्रभावकारी छैन, मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यही परिप्रेक्षमा एमाले नयाँ गठबन्धनको खोजीमा रहेको देखिन्छ भने दुवै छिमेकीले यहाँको उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् । यसले आगामी केही महिनाभित्रै मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिन सक्ने आँकलन भइरहेका छन् ।
अघिल्लोमाओवादीको प्रस्तावः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
पछिल्लोनयाँ शक्ति-फोरम र विवेकशील-साझाबीच एकीकरण हुँदै